people Nepal » सप्तरी गोलीकाण्डबारे खुलाशा : सिडिओ एमालेको कार्यकर्ता, बम हमलाबारे ओलीको हावादारी भाषण ! सप्तरी गोलीकाण्डबारे खुलाशा : सिडिओ एमालेको कार्यकर्ता, बम हमलाबारे ओलीको हावादारी भाषण ! – people Nepal
मोर्चा नेताहरूले तत्कालीन प्रजिअ उद्धव तिमिल्सिनाले एमाले नेताको निर्देशनमा काम गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । तिमिल्सिना एमालेनिकट स्थानीय निकाय कर्मचारी संघको सल्लाहकार रहिसकेका व्यक्ति हुन् । २०६१ सालमा गठन भएको संघको लगातार चौथोपटक नेतृत्व गरेका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “उद्धव सर मेरो दोस्रो कार्यकालमा सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो ।”
उनले भने “त्यसपछि हामी युवाहरूको समूह मोर्चाको निषेध तोड्न झण्डा, झण्डाभित्र डण्डा बोकेर गयौं ।”
मधेशी मोर्चामा गएको वर्ष आफूहरूलाई एमालेले इटहरीमा कार्यक्रम गर्न नदिएको आक्रोश पनि थियो । ११ मंसीर २०७२ मा संघीय मोर्चा गठबन्धनले इटहरीमा कार्यक्रम गर्न बनाइएको मञ्च एमाले कार्यकर्ताले भत्काइदिएका थिए । त्यसपछि एमाले र मोर्चाबीच पटकपटक टकराव भएको थियो । जस्तो कि, संविधान निर्माणदेखि नै सीमांकनलगायतका विषयलाई लिएर चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा थियो मोर्चा । उसले २८ पुस २०७२ देखि मोरङमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । मोर्चाले मोरङको रंगेलीमा ७ माघ २०७२ मा विरोध सभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । एमालेको भ्रातृ संगठन युवासंघ नेपालले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा ७ माघ २०७२ कै दिन रङ्गेली बजारमा ‘तराई मधेश संवाद तथा जनजागरण अभियान’ अन्तर्गत बृहत जनसभा गर्ने निर्णय ग¥यो । मोर्चाले युवासंघको कार्यक्रम बिथोल्ने नीति लियो । त्यसक्रममा सुरक्षा निकाय र मोर्चाबीच झडप हुँदा मोर्चा कार्यकर्तासहित ३ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा मोरङ रङ्गेलीकी ६२ वर्षे द्रौपतादेवी चौधरी, मोरङ बरडङ्गाका ४५ वर्षे महादेव ऋषिदेव, र मोरङ डायनियाका २४ वर्षे शिवु माझी थिए ।